Dowladda Soomaaliya oo beenisay war kasoo baxay Kenya – news
Dowladda Soomaaliya oo beenisay war kasoo baxay Kenya
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxey sheegtay in aan weli caddeymo dhameystiran loo heynin shilka Diyaaradda Beledweyne.
MUQDISHO, Soomaaliya – Dowladda Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay war lagu daabacay wargeysyada qaar ee dalka Kenya, oo ku aadan shilkii Diyaradeed ee 14-kii Bishan ku dhacday Garoonka Beledweyne.
Maareeyaha Hay’adda Duulista Rayidka ah ee Soomaaliya Axmed MacalinXasan ayaa sheegay in aysan waxba ka jirin warka la baahiyay, ee la xiriiro in shilka uu sababay Dameer dhabbaha diyaaradda ku degto ee Garoonka soo galay.
“Waxaan idiin caddeynayaa in weli baaritaannadii ay socdaan, warbixin lasoo saareyna aysan jirin, illaa haddana ma heyno cadeymo muujinaya in shilkaas uu sababay dameer” ayuu yiri Maareeye Axmed Macallin Xasan.
Wargeyska Bussines Daily ee ka soo baxa Kenya oo xiganaya mas'uuliyiin katirsan maamulka shirkadda diyaaraddii bur-burtay ayaa warkaasi qorey.
Diyaaradda oo aheyd mid xamuul ah, kana soo duushay dalka Jabuuti ayaa sidday gargaar bini'aadanimo, oo loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed ee saameyntu ku yeelatay fatahaadii Beledweyne.
0 Comments Topics: kenya shil diyaaradeed